करोडपति बनीसकेका ३२ वर्षीय कान्छा गुरुङको गोठमा साठी वटा चौँरी - Enepali Online
मनाङ। मनाङको नेस्यङ गाउँपालिका–६ का ३२ वर्षीय कान्छा गुरुङ चौँरीपालनमा व्यस्त छन् । शुरुमा दश वटा चौँरीबाट व्यवसाय शुरु गरेका गुरुङ अहिले करोडपति बनीसकेका छन् । अहिले गुरुङको चौँरी गोठमा साठी वटा चौँरी छन् । चौँरी गाईकाे व्यापार एवं दुग्धजन्य उत्पादनबाट गुरुङले मनग्ये आम्दानी गरेका छन् ।
आजकाल पढेलेखेका युवा विदेशिएका र जागिरको सिलसिलामा शहर बजारमा भौँतारिएको देख्दा आफूले अँगालेको पुख्र्यौली पेशा नै उचित भएको गुरुङ बताउँछन् । ११ वर्षदेखि चौँरी गोठमा बस्दै आएका कान्छा गुरुङले शुरुमा जम्मा १० वटा चाँैरीबाट यो पेशाको थालनी गरेको बताए ।
अहिले ६० वटा चौँरी र १५ वटा भाले (याक) रहेका छन् । उनी चौरीको दूध दुहुने, मोही पार्ने र दूधदहीबाट विभिन्न परिकार, चिज, नौनी, घ्यु र छुर्पी बनाउछन् । अहिले एक केजी नौनीको रु २५ सय पर्छ भने एक पालामा करिव १० केजी नौनी हुन्छ । उनले उत्पादन गरेका यी परिकारहरु मनाङका होटललगायत काठमाडौं पोखरा र बाहिरी मुलुकमा समेत पुग्ने गरेका छन् ।
Previous Post Previous post: होली खेल्दै हुनुहुन्छ ? छालाको क्यान्सर होला
Next Post Next post: सानोतिनो गल्ति भयो भन्दैमा सम्झाउनेकी मार धुलाइ दिने? भिडियो आफै बोल्छ !!